बसन्त चौधरी सहित नेपालका ५० साहित्यकार मेरठमा भेला हुँदै - Everest Dainik - News from Nepal
बसन्त चौधरी सहित नेपालका ५० साहित्यकार मेरठमा भेला हुँदै
काठमाडौं, मंसिर ५ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मेरठ शहरमा हुन गइरहेको ‘कान्तिधारा मेरठ साहित्यिक महाकुम्भ’ मा सहभागी हुन नेपालबाट ५० जना साहित्यकारको टोली त्यसतर्फ जाने भएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगलबार नै केही साहित्यकार मेरठ प्रस्थान गरिसकेका छन् भने अधिकांश साहित्याकार बुधबार जाने भएका छन् ।
तीन दिनका लागि तय साहित्य सम्मेलन यही मंसिर ८ देखि १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट उद्योगपति तथा कवि एवं लेखक बसन्तकुमार चौधरी, गजलकार डा.घनश्याम परिश्रमी, साहित्यकार डा.श्वेता दिप्ती, सनत रेग्मी, आर.आर. चौलागाई, सूर्य लाकोजू, गणेशप्रसाद लाठ, ऋषिप्रसाद लामिछाने (गोर्खे साँइलो) लगायत ५० साहित्यकारको सहभागिता रहने छ ।
नेपाल र भारत दुवै देशमा ‘ग्रिन केयर सोसाइटी’ को माध्यमद्वारा पर्यावरण र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका भारतीय समाजसेवी एवम् साहित्यकार डा.विजय पण्डितको सक्रियतामा यो हुन गइरहेको छ ।
कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजकमा ‘वसन्त चौधरी फाउन्डेसन’ रहेको छ । कार्यक्रमको आयोजक संस्थामा नेपालको तर्फबाट काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने हिन्दी मासिक पत्रिका ‘हिमालिनी’ रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल र भारतको अतिरिक्त क्यानडा, अमेरिका, नर्वे, हङकङ, भुटान लगायत देशका साहित्यकारहरुको पनि उपस्थिति रहने छ ।
कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताहरुमा प्रो राजीवकृष्ण सक्सेना (अध्यक्ष सार्क विश्वविद्यालय, नयाँदिल्ली), डा. योगन्द्रनाथ शर्मा (पूर्वसदस्य, साहित्य एकेडेमी भारत सरकार) को रहने छ ।
ट्याग्स: basanta chaudhary